Real Madrid oo si RASMI ah u shaacisay liiska 20-ka ciyaaryahan ee kaga qeyb galaya kulanka Deportivo Alaves – Gool FM
(Madrid) 23 Jan 2021. Real Madrid ayaa si RASMI ah u shaacisay liiska 20-ka ciyaartoyda ay ku shaqayn doonaan kulanka caawa ee horyaalka La Liga ay la ciyaari doonaan naadiga Deportivo Alaves.
Real Madrid ayaa liiskan ay shaacisay ee ugu qeyb galaya kulanka caawa ay booqan doonaan kooxda Deportivo Alaves waxaa hoggaaminaya Xiddigaha reer Belgiam ee Karim Benzema iyo Eden Hazard
Laakiin taasi badelkeeda waxaan liiskan ku soo bixin oo ka maqan 6 ciyaartooy muhiim ah, kuwaasoo kala ah Sergio Ramos, Dani Carvajal, Rodrygo, Federico Valverde oo ku maqan sababa la xiriira dhaawac.
Nacho ayaa sidoo kale kaga maqan liiska xiddigaha kooxda Real Madrid sababo la xiriira shaki looga qabo caabuqa saf mareenka ah ee Korona Fayrsan, halka sidoo kale uu liiskan ka maqan yahay Martin Ødegaard.
Dhinacaa kale Real Madrid ayaa shaalay war rasmi ah oo ay soo saartay ku sheegtay in Zinedine Zidane laga helay Korona Fayras kaddib baaritaankii ugu dambeeyey oo lagu sameeyey.
Haddaba halkaan hoose ka eeg liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ay kala qeyb galayso kulanka horyaalka La Liga ee kooxda Deportivo Alaveso:-